Miorina tsara ve ny bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta bisikileta - ahoana no hanapahanao hevitra
Bisikileta bisikileta - ahoana no hanapahanao hevitra
Miorina tsara ve ny bisikileta?
Iray amin'ireo tombontsoa tsara azo avybisikiletaizany tokoa venomanaonytsara kokoa ny mijery ny boriky.nyny glute dia ho matanjaka kokoa, ho tony kokoa, ary ireo tahirin-tavy maditra dia hanomboka hihalefaka ary mamela anao mafyvodyizay hita fa tsara amin'ireo pataloha bisikileta tery hoditra io.16 mart 2014
Olona maro be. Azoko antoka fa mijery lasely bisikileta aho ary mieritreritra fa tsy hoe tsy mahazo aina fotsiny izany, fa mety ratsy aminao koa. Fantatrao - miteraka fahasimbana, fanaintainana, tsy fahampian-tsofina ary, amin'ny lehilahy, mety tsy fahatomombanan'ny erectile, angamba homamiadan'ny prostaty.
Nefa maro amintsika no mandeha bisikileta ary tsy manana olana velively. Ny mpitaingina bisikileta kosa, manao izany. Manana aho, ka afaka milaza aminao aho fa rehefa misy zavatra mitranga dia tena manahy.
Jereo - ity no Andriamanitro ô! Nody faty tanteraka ny filahiako! 'Hiverina amin'ity indray ity isika rehefa mijery ny olana manodidina ny fahasalaman'ny lehilahy sy ny bisikileta. Mba hanaovana izany, dia niara-niasa tamin'ny iray amin'ireo urologista malaza any Angletera izahay - lehilahy iray antsoina hoe Anthony Koupparis - hanome torohevitra hentitra sy azo ampiharina izay tokony henoin'ny lehilahy bisikileta rehetra ary rehefa mila antony hafa ianao fa tsy traikefa amin'ny klinika hinoanao izay nilaza izy fa lehilahy vy koa ary mandany fotoana be ao amin'ny lasely ireto tovolahy ireto. Alohan'ny hanombohantsika, ity misy lesona momba ny anatomika haingana.
Izay no fomba hitondrako ny bisikiletako. Taolana mitaingina bisikileta izao ary ity vita dia filaharan'ny filahiana.
Atsaharo ny fihomehezana any aoriana. Sady tsy tsara no marina raha mizana. Na eo aza izany, sangisangy ankilabao, tena zava-dehibe ny mahatakatra ny anatomia antsika manokana.
Ho fantatrao, azoko antoka fa rehefa mitaingina ny filahanao sy ny testicle dia miafina tsara matetika. Ny faritra misy sela malemy eo anelanelan'ny vodinao sy ny testisinao dia antsoina hoe perineum anao, ary rehefa mandeha bisikileta ianao dia mifandray amin'ny lasely ity faritra ity. Eo ambanin'ny hoditra no misy ny uretrao, izay fantsona mampifandray ny tatavia amin'ny tontolo ivelany amin'ny alàlan'ny filahiana.
Ny perineum koa dia misy ny lalan-drà goavambe sy ny hozatrao pudendal izay manome ny fahatsapana ny faritra ary koa manampy amin'ny fananganana. Etsy ambonin'ny perineum no misy ny prostateo, ny fihary any izay mamokatra tsiranoka azo avy amin'ny tsinay ary mamakivaky ny uretra. Raha jerena ny anatomia antsika sy ny endrik'ilay lasely, dia toa mety ny manao ny fifandraisana misy eo amin'ny bisikileta sy ny fanaintainana na ny tsy fahasalamana, ny fihenan'ny erectile sy ny olana amin'ny prostaty, fa andao jerena akaiky kokoa izany.
Fa aza manahy. Tsy miharihary kokoa noho ny efa hitanao io, hoy izy ireo tamin'i Anthony mba hofoanany ity lohahevitra ity. Noho izany dia manana tsy fahamatorana isika, tsy fiasa erectile ary koa homamiadan'ny prostaty, indrindra ny homamiadan'ny prostaty.
Aleo atomboka amin'ny marenina ary voalohany, azoko lazaina ve? Ianao ve ny tantarako? - Ho izany, eny
Mahatsiaro aho fa mifankahalala tsara aho milaza izany momba izany. Tamin'izaho tao anaty tionelin'ny rivotra tao Indianapolis ary nanao fitsapana ny tionelina rivotra izahay, amin'izay dia tokony hipetraka moramora amin'ny bisikileta mandritra ny 30 minitra ianao ary ny bisikiletanao manadio tanteraka ny zoron'ny rivotra. Ny dikan'izany dia mila mihetsika tanteraka ianao amin'ny vatanao ambony, satria ny karazana twitching rehetra dia hanodikodina ny valiny.
Noho izany dia toe-javatra namboarina nitaingina bisikileta ary rehefa afaka 30 minitra dia nivoaka aho ary hitako fa vetivety dia tsy nisy fahatsapana mihitsy tamin'ny penisako, izay tena mandeha tokoa, satria fantatrao fa niverina ilay fahatsapana. Ka amin'ny faran'ny andro dia mieritreritra aho fa tsy nisy zavatra nitranga tamin'ny fotoana maharitra, fa inona no mitranga ao anatin'ny fotoana fohy? Amin'ny ankapobeny dia noho ny tsindry apetrakao mivantana amin'ny perineum dia manindry ny nerve ianao ary manindry ny lalan-drà sasany ary izany no mahatonga ny tsy fahatomombanana. Rehefa tapitra ny fotoana hipetrahana eo amin'ny nerve dia hitaky fahasimbana kely dia kely izay tsy fahavoazana maharitra, amin'ny ankapobeny dia miteraka fahamaimaizana eo amin'ny faritra anompoany, izany no nanjo anao.
Ka io dia mitovy amin'ny torimaso amin'ny toerana hafahafa ary mifoha amin'ny tananao maty tanteraka ary mampivadi-po be, fa miverina haingana be ilay fahatsapana ary tsy misy simba maharitra. Tena mitovy amin'ilay marina. Ka inona no tokony hataontsika amin'izay? Raha mijaly amin'ny marenina isika rehefa mandeha bisikileta, inona no seranana antso voalohany? Raha hitanao fa mitranga izany dia mandehana amin'ny bisikileta fa ho faty aorian'izany.
Fantatro bebe kokoa noho ny nataoko, mahazo bisikileta mety ianao ary misy olona mijery ny lasely sy izay rehetra miaraka aminy. Raha mandeha bisikileta mandritra ny fotoana lava ianao ary isaky ny tsy miteny ao amin'io faritra io izy ary mijanona ho moana ary avy eo dia manao zavatra mitovy hatrany hatrany ianao dia tsy azo ihodivirana ny fahavoazana maharitra fa ny fahaiza-misaina kosa no mitaky ary indray mandeha. dia mahazo ny mety sy ny lasely bisikileta mety fotsiny. Ny vanim-potoana iray manjavozavo aorian'izay dia tsy hiteraka fahasimbana maharitra amin'ny fahatsapana amin'ity faritra ity na ny fananganana ary ny toy izany.
Avy eo ny lohahevitra manaraka dia ny fihenan'ny erectile ary avy amin'ny zavatra henontsika momba ny tsy fahasalamana, misy rohy ve eo anelanelan'ny bisikileta, ny tsy fahatomombanana miverimberina izay mitarika amin'ny tsy fetezan'ny erectile? - ny valiny dia tsia. Ny tena zava-dehibe dia ny maha-zava-dehibe ny tsy fetezan'ny erectile aloha. Ny fizotrany izay mitarika olana eo amin'ny erectile dia mitovy tanteraka amin'ny fizotrany mitarika aretim-po, izay mitarika aretim-po.
Ka raha voan'ny diabeta ianao, tosidrà avo, na setroka, dia azo inoana fa voan'ny erectile ianao, fa mety marary fo koa ianao. Ny tena marina dia hanomboka bisikileta ny ankamaroan'ny olona antonony. Raha mpitaingina bisikileta ianao izao ary amin'io vanim-potoana voafaritra io dia tsy tokony hiasa erectile, ny eritreritrao voalohany dia tsy tokony hoe, 'Oh, ity no lasely' noho ny bisikileta ihany. 'Tokony izany, tsy haleviko ao anaty fasika ny lohako. Mety ho famantarana zavatra tsy mbola voamarina io.
Mila manamarina an'io karazana fahasimbana amin'ny nerveo pubic io aho izay mety hitarika tsy fetezana erectile. Ka sarotra ve izany? Izany fahatsapana fahanginana mahatsiravina misy fiatraikany amin'ny perineum izany dia tsy hanome anao ny tsy fetezan'ny erectile. Mandehana ary jereo izany.
Voalohany, ny fananana MOT araka ny fijerin'ny fony, dia maninona raha manana fitsaboana olana amin'ny fananganana? Midika izany fa feno ny faribolana. Niainga tamin'ny zavatra somary nihomehy izy io, ka lasa tena olana ara-pahasalamana azonao alaina. Ary ho hitanao izany.
mexico bisikileta an-tendrombohitra
Ahoana ny amin'ny olana mifandraika amin'ny prostaty sy ny homamiadan'ny prostaty. Soa ihany fa tsy misy fiatraikany amin'ny homamiadan'ny prostaty ny bisikileta. Saingy tsy ny fivoaran'ny homamiadan'ny prostaty ihany, fa ny fanontaniana ihany koa raha toa ka voamarina tsy voan'ny homamiadan'ny prostaty ianao.
Ny iray amin'ireo zavatra ampiasaintsika mba hanondroana fa mety voan'ny homamiadan'ny prostaty dia ny fanaovana fitsapana amin'ny ra ary misy ny eritreritra fa raha mandeha bisikileta betsaka ianao dia mety hanorisory ny prostatyo ary mety io ny fitsapanao rà izay antsoina hoe PSA antsoina hoe artifisialy. Asandrato ny fitsapana ny ra fitsapana ra antigen manokana prostaty izay tonga amin'ny fotoana nanaovanao izany fitsapana ra izany dia nisondrotana tamin'ny fomba artifisialy ary avy eo dia manana fitsapana maromaro izay tsy nilainao mihitsy satria nandeha bisikileta ianao ary tena tsy marina izany, tsy izany - misy vintana mety hisy fiantraikany kely amin'izany, fa raha mijery ny fikarohana mifototra amin'ny laboratoara amin'ny maro ianao, maro ny marika molekiola ho an'ny homamiadan'ny prostaty, bisikileta ary manao fanatanjahan-tena dia tsy misy mahasamihafa ireo mariky ny homamiadan'ny prostaty, noho izany dia tsara ny bisikileta azonao tsara kokoa, manatsara ny fahasalamanao aretim-po rehetra ny zavatra mampihena ny mety homamiadana anao ary tsy misy fiatraikany amin'ny fizahana homamiadana prostaty tsy mety. Ary avy eo mitohy. Soa ihany fa tsy misy ahiana be ny homamiadan'ny prostaty.
Ny tokony hataontsika lehilahy dia ny mieritreritra an'izany. Ka rehefa mihalehibe isika dia avo kokoa ny mety ho voan'ny homamiadan'ny prostaty. Ny zavatra voalohany tokony hataonao izao dia ny mahatsapa ny sasany amin'ireo soritr'aretina ankehitriny, ny zavatra tadiavintsika dia ny zavatra toy ny soritr'aretin'ny rano, ny fanaintainan'ny lamosina, ny olana amin'ny fandehanan-dra ao anaty rano, ireo karazan-javatra ireo, raha manahy ianao ireo zavatra ireo, raha miaina ireo zavatra ireo ianao avy eo dia tokony hahita dokotera urologist na dokotera ao amin'ny fianakaviana ianao ary hanana adihevitra mirindra momba ny fanombanana.
Tsy midika izany fa hozahana homamiadan'ny prostaty ianao, fa io dokotera manokana io dia hitety anao amin'ireo zava-tsoa amin'ny fanadinana ary angamba ireo lafiny ratsy amin'ny fanadinana. Avy eo ianareo roa dia afaka manapa-kevitra raha handeha foana na tsia. Tsy tiako ny bandy tsy miraharaha azy io amin'ny voalohany.
Ary amin'ny ankapobeny, hitantsika ireo zavatra ireo talohan'izao andro izao ary afaka alamina tanteraka izy ireo. Firy taona no resahintsika eto? Firy taona no tokony hampanahy anao? Ary azoko fa misy ohatra mampalahelo fantatrao, tranga voalohany, saingy marina ny anao.
Noho izany ary miaraka amin'ny ahy amin'ny fanazaran-tenako dia manana sary diso be aho. Noho izany dia manana fanazaran-tena lehibe izahay ka hananan'ireo marary 30 ans hatramin'ny 80 sy 90s azy, ary raha manana soritr'aretina mampiahiahy ianao dia aza mikoropaka, apetaho amin'ny fasika ny lohanao ary mitondrà hevitra. inona ny olana, raha misy saina mena mihetsika ary raha ilainao izany dia tsy misy fifandraisana eo amin'ny bisikileta sy ny homamiadan'ny prostaty, fa ny homamiadan'ny prostaty dia olana lehibe amin'ny ampahany betsaka amin'ny mpitondra bisikileta satria izy ireo dia lehilahy, antonony izy ireo ary noho izany mila mieritreritra an'izany. Tsy fantatro ny momba anao fa ny fialako lehibe indrindra tamin'ity resaka nifanaovana tamin'i Anthony ity dia ny hoe mety tsy tokony hataontsika ambanin-javatra ny fahasalamantsika, tokony hiatrika ny fahafatesantsika isika ary hikatsaka tokoa fanampiana rehefa mila izany isika satria tsy mahazo mahia gs angamba no olana lehibe indrindra hatrehintsika rehetra izao angamba nandalo fampahalalana somary be loatra aho rehefa nitantara taminao ny filahiako bontolo tao anaty tionelin'ny rivotra fa mieritreritra aho amin'izany tokony hiezaka daholo isika rehetra e Resadresaka iray - Raha angamba ny namantsika ao amin'ny klioba no mitantana azy amin'ity faran'ny herinandro ity, farafaharatsiny mba mifampiresaka momba an'ity lahatsoratra ity heveriko fa toerana tsara hanombohana. Ankehitriny koa, azafady mba alao antoka fa manome ahy ankiben-tànana lehibe hisaorako an'i Anthony tamin'ny fotoanany sy ny zavatra niainany tsy zaka, ary raha te hahita lahatsoratra hafa amin'ity lohahevitra ity ianao.
Manana iray fotsiny amin'ity fantsona ity izahay izay hanampy anao hividy lasely mety aminao hiatrehana ny olana voalohany amin'ny lohalika.
sakafo mampiadana anao
Inona no ataon'ny bisikileta amin'ny volanao?
Bisikiletaasanytongotra sy glute, indrindra rehefa miakatra ianao, nefa ionotsy maharitra maharitra na manome fanoherana ampy hananganana hozatra lehibe. Amin'ny ankapobeny, ny hetsika kardio toy nybisikiletadia ho tsara kokoa amin'ny fandoroana ny tavy manodidinany glutehozatra noho ny amin'ny fanamboarana azyny vatanaolehibe kokoa.
Fa maninona no manjary maloka kokoa ny vatako?
nyvatosoa fisakadia mety vokatry ny antony maro amin'ny fomba fiainana, ao anatin'izany ny asa na hetsika mipetrapetraka izay mitaky anao hipetraka mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa mihantitra ianao diavodymety ho fisaka sy very endrika noho ny tavy ambany kokoa ao amin'nyfitombenako.
Ny bisikileta ve mahasalama ny vavoninao?
Afaka bisikiletamanampy anao hahatratranytanjon'ny fahasalamana. Maykibonaomatavy ary ianaoafakamahazo mpandokavavony. Raha mandeha bisikileta isan'andro ianao adiny 1 amin'ny hafainganam-pandeha na 15 mph izay handoro kaloria 465. Ny kaloria izaybisikiletamayafakaampio tavy hatramin'ny kilao, fa raha mandeha tsy tapaka ianao.
Ry sakaiza mpiaramiasa, mitady fomba hanatsarana ny endrika sy fahatsapana ny abs ianao, raha toa ka nitombo ny lazan'ny dadbod, ny kitapo 6 notadiavina dia tsy very ny fifandraisany dia iray amin'ireo fampihetseham-batana malaza indrindra, fa ahoana raha hanao azy tsara Firy ny kaloria azon'izy ireo hodorana, azon'izy ireo atao tsara ve ny manala ny vavoninao, sa angano izany, momba an'izany rehetra izany sy ny maro hafa, fa andao atomboka ny tsy fitovizan'ny crunches sy ny sit-ups? Betsaka ny Aven Thues no tonga eo amin'ny safidy eo amin'ny situp sy ny Tsitoha Tsitoha raha misy fahasamihafana lehibe. Betsaka ny olona mino fa ny crunches dia fomba tsotra fotsiny hanaovana situps satria ny hozatra isan-karazany dia tsy miady amin'ny vavony mandritra ny androm-piainany fotsiny, fa manandrana koa ny tratra, ny vozona, ny lamosina ary ny tongotra ambany amin'ny lafiny iray hafa, kendrenao manokana ny abs-nao ab, ry zareo Miorina amin'ny atiny fotsiny ianao, fa iza amin'ireto no malaza kokoa, miankina amin'ny tanjona kendrenao tadiavinao hatao, raha maika ianao ary manandrana miasa hozatra maro indray miaraka amin'ny fampihetseham-batana tokana mety handeha aho miaraka amin'ny sit-up Raha mila fampihetseham-batana mafy ianao izay hanosika ny crunches abs no lalana tokony haleha, fa alohan'ny hahatongavanao amin'ny matotra fanazaran-tena dia mety te-hihaino ny fomba fanaovana crunch mety ianao mba hahalavorary izany. ny tenanao aloha mametraka ny lamosinao amin'ny tany mba tsy ho vazivazy ny tsipika manodidina ny tsihy fanazaran-tena, ho karazana pad malefaka ianao amin'ity fanazaran-tena ity Ny dingana manaraka dia ny hahazoana antoka fa miondrika ny tongotrao, ny lohalinao miaraka amin'ny tongotrao nambolena nanohitra ny tany. Alao an-tsaina an-tsaina ny olona iray miaraka amin'ny tongony amin'ny fandidiana amin'ny gorodony.
Ataovy ao ambadiky ny sofinao ny tananao rehefa faly amin'ity toerana ity ianao. Ny zavatra tsara manaraka dia ny miampita azy ireo amin'ny tratranao rehefa vonona, atsangano ny lohanao mba ho eny ivelan'ny gorodona ny soroka faran'izay betsaka, amin'ny fampiasana an'ity hetsika ity miadana, tianao ihany koa ny hitazona ny lohanao amin'ny toerana milamina. Izany dia mba hanoloanao ny tsindry ataon'ny vavonao ary manakana ny faritra hafa amin'ny vatanao tsy haratra raha vao mahatsapa ianao fa afaka miverina miadana tsikelikely amin'ny toeranao toy ny isan'ny famerimberenana miovaova, na dia manandrana mitazona aza ianao manao andiany telo isaky ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo repoblika, raha manandrana mamaky an'io ianao dia afaka manao zavatra betsaka kokoa. Ny sasany manolotra crunches 50, ny sasany kosa milaza fa tokony handeha any amin'ireo crunches an-jatony maro any no andao horesahina momba izany fa alohan'ny fotoana mandehana mitady fiofanana bebe kokoa mety hitanao amin'ny lahatsoratray momba ny fanazaran-tena fito hanamaivanana ny fanaintainan'ny lohalinao n Na dia hiteraka zazakely aza ianao dia tsindrio ny rakitsary ataonay amin'ny akora simika poizina napetraka ao amin'ny Baby Food May Terjana Crunch Exercise dia mampiofana ny abs récus
Ity no tena malaza indrindra amin'ireo hozatra lehibe efatra ary manampy anao hamorona izay mahazatra fantatra amin'ny hoe fonosana 6. Ity no karazana crunch nandehanantsika taminao iray minitra lasa izay. Fomba iray malaza hafa, ny crunch tongotra mitsangana dia mitaky miatrika ny lamosinao amin'ny tongotrao Manondro ny valindrihana avy eto, tokony hampiakarinao moramora ny lohanao sy ny sorokao hiala amin'ny gorodona.
Ny tanjon'ity toerana ity dia ny fampitomboana ny hamafin'ny fanatanjahan-tena sy ny fiasan'ny oblique ivelany anao. Angamba raha mahazo aina amin'ny endrika fototra efa henonao momba ny bisikileta bisikileta ianao dia afaka miroso amin'ilay fanazaran-tena ity? Ho an'ny fampihetseham-batana sarotra tokony hataonao, dia mitovy amin'ny fihaviany, ny crunches bisikileta dia manomboka amin'ny toerana mitovy amin'ny crunches hafa, saingy misy antsasaky ny fihodinana. Mihazona ny tananao ara-bakiteny eo an-dohanao ianao.
Mila misintona lamosina hiverina ianao ary atsangano ny lohalikao amin'ny zoro 90 degre ny tongotrao dia ho santimetatra vitsivitsy miala amin'ny gorodona rehefa miaina ianao. Afindrao moramora ny tongotrao rehefa manosika ny lohalika iray hanantona ny tananao ianao rehefa mitaingina bisikileta nefa mitazona ny tongotra mifanohitra amin'ny tsipika mahitsy eo am-pihodinana ny vatanao mba hikasika ny lohalika eo amin'ny tendrony mifanohitra ny kiho ary hamerina ilay hetsika mitovy amin'ilay tanana iray hafa, indray mandeha Vonona amin'ny fanaovana bisikileta bisikileta ianao fa miasa be loatra amin'ny fotony manontolo izay midika hoe kibo mahitsy sy kibo miampita. Manoro hevitra anao ny hanao andiany telo miverimberina 12 ka hatramin'ny 20 isaky ny fivoriana.
Na dia somary manandanja aza izy io, ahoana no ahafahan'ny crunches manampy anao hampihena? Ankoatra ny fanatontosanao ny nofinofisinao dia maro no misafidy ny hanao crunches amin'ny fotoana voalohany andramanao hampihena, fa misy anton-javatra betsaka kokoa noho ny mieritreritra ny habetsaky ny kaloria nohaninao, arakaraka ny zavatra toa ny lanjanao ankehitriny, ny vatanao karazana, ary ny tanjaky ny fampihetseham-batanao Milanja 200 pounds eo ho eo ary mijoro amin'ny dimy metatra 6. Mety ho afaka mandoro kaloria 35 ianao, aorian'ny crunches dimy minitra. Ny vehivavy kely kokoa izay milanja 150 pounds dia afaka mandoro hatramin'ny kaloria 46 ao anatin'ny dimy minitra, saingy azo atao izany amin'ny alàlan'ny fanaovana crunches voafantina amin'ny hafainganam-pandeha raha mitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha haingana sy mahasosotra mandritra ny 10 minitra lavitra ianao dia afaka mandoro kaloria efa ho 100 amin'ny alàlan'ny fanombohana fanao mahazatra crunches.
Ny tsara indrindra dia ny tsy fanaovana azy ireo isan'andro, toy ny hozatra rehetra, maka fotoana ialana sasatra izy ireo. Raha ny marina, ny fanadihadiana iray tamin'ny 2015 dia naneho fa ny fivoriana iray isan-kerinandro dia ampy hampirisihana ny fiaretana ny kibo amin'ireo zatovo lahy sy vavy tsy zatra fiofanana ary koa raha ianao dia olona vao manomboka c. Runches Ity dia fampahalalana mahaliana hitazona ary na dia misy aza ny lafy tsarany mila jerentsika ny sary lehibe kokoa, rehefa dinihina tokoa, mitady ny marina isika, miteraka fanontaniana lehibe izany, tena ilaina tokoa ny crunch-tsika io, io fanazaran-tena io dia azo antoka fa fampihetseham-po malaza ao amin'ny junkies fanazaran-tena maro no niady hevitra na hiasa izy ireo na tsia.
Ny mpikambana sasany ao amin'ny vondrom-pitsaboana dia nilaza fa ny fanatanjahan-tena dia manimba. Ny crunches dia mety hitarika fanaintainana ambany kokoa amin'ny lamosina sasany. Ny manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana dia lasa lavitra mba hanoro hevitra ny fisorohana azy ireo. Fantatro amin'izao fotoana izao fa maro aminareo no mety ho very hevitra. crunches manampy fisaka ny kibonao izay ny faritra sarotra. Ny crunches dia manana ny tombony azony amin'ny fanampiana ny hozatrao hanangana abs matanjaka, fa tsy izy ireo ny fampihetseham-batana feno indrindra mandritra ny fitetezam-paritra amin'ny vondron'olona mikendry hozatra manerana ny vatana Manorotoro ny hozatra ao amin'ny faritra misy ny kibo manasaraka ny olona sasany izay t crunch, aza miraharaha ny ABS maro amin'izy ireo no te ho very tavy Eto no mety hahasosotra anao ny fampihenana ny tavy dia ezaka iray izay mitaky kely kokoa matetika satria ny crunch hitanao fa ny fahaverezan'ny tavy dia zavatra mitranga manerana ny faritra rehetra vatana R Mitranga Tsy vitan'ny hoe afaka mamoy tavy amin'ny faritra iray ianao raha toa ny tanjonao dia ny hihena sy ho salama kokoa, mety hanomboka hampihena ny fatran'ny kaloria ianao. Mila kaloria 2000 eo ho eo isan'andro ny vehivavy antonony raha mila 2.500 ny lehilahy salantsalany. Mitahiry kaloria amin'ny fihinanana 500 eo ho eo isan'andro raha te hanampy fampihetseham-batana ianao amin'izany tranga izany, mety hipetraka tsara kokoa ny sit-up raha miasa ny crunches, voafetra ihany ny vokany fa raha mandeha amin'ny fonos enina ianao dia avelao aho tsy hanahirana, mifantina fotsiny ny karazana crunch tadiavinao hatao ary alao avy hatrany ny endrikao ampahafantaro anay aorian'ny fijerena an'ity lahatsoratra ity dia ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany.
Tianay ny maheno anao, mankafy an'ity lahatsoratra ity, toa ary manoratra amin'ny besties miandry inona karazana tafika izahay raha tsy milaza aminao ny momba ireo lahatsoratra na lahatsoratra mahafinaritra anay hafa ary mifaly miaraka amin'izy ireo
Mampitombo ny vatanao ve ny squats?
Rivotrasquatsdia tsara ho an'ny vao manomboka, fa rahaianareoefamikotrokanandritra ny enim-bolana mahery nefa tsy tsikaritrany vatanaoSAMBATRAlehibe kokoa,ianareomila manampy lanja, hoy Arias. Toy ny hozatra,ianareomila mampitombo ny fanoherana arak'izaynyglute maniry.6 Aogositra 2020
Mampitombo azy ve ny voditongotra mamoritra?
Mampitombo ny habeny ve ny vodin'ny fery? Tsia,voafehynyfitombenakoirery tsy hanaoataovy lehibe kokoa, raha tsy tanterahina amin'ny fampiharana na fihetsika marina. nyataovy lehibe ny vodinao, mila mampiofana ireo hozatra telo an'nygluteizany hoegluteusafovoany;gluteusmaximus, arygluteushozatra minimus. g.
Ampy ve ny 30 minitra amin'ny bisikileta mijanona?
Raha mitady handatsaka kilao vitsivitsy ianao, anbisikileta fanatanjahan-tenadia fomba mahomby tokoa handoroana kaloria. Mitaingina abisikileta mijanonaHO AN'NY30 minitraindray mandeha dia afaka mandoro na aiza na aiza eo anelanelan'ny 200-300 kaloria (miankina amin'ny lanjan'ny mpampiasa).8 Okt 2019
Aleo ihany mandeha na mitaingina bisikileta mba hihena?
Raha resaka fandoroana kaloria dia fomba haingana kokoa ny mandeha bisikiletamampihena lanjanoho nyMANDEHA. Amin'ny tany lemaka, olona 150 kilao dia handoro bisikileta 600 eo ho eo mandritra ny adiny iray (miankina amin'ny hafainganam-pandeha) raha ampitahaina amin'ny kaloria 300 eo ho eo monjaMANDEHA.
Hahavita inona ve ny squat 100 isan'andro?
Manao squat 100 isan'androdia nanampy tamin'ny fitifirana ny feny sy ny zanak'omby. Na dia tsy voaviravira aza izy ireo, dia efa nokasihina sy feno fisaorana ary, tsy misy paosy cellulite intsony. Eny, fiheverana iraisan'ny rehetra izanysquatsdia natao ho an'ny vatanao ambany ihany.8 Jona. 2020 g.
Hahavita inona ve ny squats 50 isan'andro?
“Raha misakafo ara-pahasalamana ianao, dia manaova fanatanjahan-tenaisan'andro, avy eo ianaotokonyjereo ny valiny tsara amin'ny glute ao anatin'ny 30 andro. Fa raha manao fanatanjahan-tena ianao dia nanampySquats 50 isan'androfa tohizo hatrany ny sakafo tsy mahasalama dia izaydiatena manakana ny vokatrao. ” Fanamarihana samirery: Atsofohy ny Doritos.25 feb 2021
Ahoana no hanomezan'ny bisikileta volo lehibe anao?
Ny bisikileta dia miasa ny tongotrao sy ny glute, indrindra rehefa miakatra ianao, saingy tsy maharitra maharitra izany na manome fanoherana ampy hananganana hozatra lehibe. Mila mihoatra ny bisikileta ny fanomezana anao vodin-trano lehibe. Ity kale pesto mahavariana ity dia 210 fotsiny ny kaloria ary manankarena oxyidant!
Inona no karazana hozatry ny vodin-tsambo ampiasaina?
Jereo ny mpitaingina bisikileta matihanina dia ho hitanao ny antsoin'ny talen'ny faharetan'ny USA Cycling amin'ny endriny 'hafahafa': quad mibontsina sy vodiny be misy valahana kely. Ireo mpitaingina bisikileta tsara indrindra dia samy mampiasa ny quad na ny glute, na ny hozatry ny vody, mba hanomezana hery isaky ny mandeha pedal.
Fa maninona ny Buttako no marary rehefa mandeha bisikileta aho?
Ny fery marary dia mitranga rehefa sosotra ny sela malemy. Tsy maharitra fa mety hanelingelina. Voatonona koa ho toy ny aretin-koditra, ny fijaliana dia saika ny olona rehetra mandeha bisikileta. Ny fomba mora indrindra hanasitranana vody marary dia ny miverina amin'ny bisikileta ary mitaingina. Na ny bisikileta efa za-draharaha aza dia mahazo ambany ambany rehefa mandeha lavitra.